စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် သန္တာလှိုင် နှိုးဆော်...! - Thadin
HomeNEWSစိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် သန္တာလှိုင် နှိုးဆော်…!
စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် သန္တာလှိုင် နှိုးဆော်…!
May 18, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on စိုးရိမ်စရာ ကောင်းတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေအတွက် သန္တာလှိုင် နှိုးဆော်…!
မော်ဒယ် သန္တာလှိူင် ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေတဲ့ သူတွေကို သူမရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာကနေ တဆင့် နှိုးဆော်လိုက်ပြီနော်..။ ကြောက်စရာ အခြေအနေ ရောက်နေလို့ မြန်မာနိုင်ငံက လူတွေ မျက်စိပွင့် ကြပါတော့ရှင်..လို့ နှိုးဆော် လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်… ။
မြန်မာနိုင်ငံ မှာ နေတဲ့သူတွေ မျက်စိပွင့်ကြ ပါတော့ရှင်…. ကြေက်စရာကြီးကို ကြောက်ရကောင်းမှန်း သိအောင် ကျွန်မ ဘယ်လိုများ ပြောရ ပါ့မလဲ ? ဟိုးအရင်တုန်းက အုံ့အုံ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ စိမ်းစိုခဲ့တဲ့ ဒီ နိုင်ငံကြီးက နေရင်းထိုင်ရင်း ထပြီး ပူလာတာ မဟုတ်ပါဘူး … ။
ဟိုတယ် ဆိုတဲ့ ပါမစ်လေး တင်လိုက်တာနဲ့ ကောင်စီက ခုတ်ခွင့်တွေ ပေးလိုက်တာ… လွင်ထီးခေါင်ပြင်ကြီးကို ဖြစ်သွားရောပဲ…ဒီထက် ဆက်ပြီး အပူချိန် ပိုမြင့်လာရင် အပင်အသစ် တွေတာင် ပြန်စိုက်ဖို့ မလွယ်တော့တဲ့ သဲကန္ဒာရကြီးလို ဖြစ်သွားမှာ မကြောက်ကြဘူးလားရှင့်…။
ဒီပုံလေးကိုပဲ ကြည့်ကြည့်ပါ အရင်တုန်းက မြန်ာနိင်ငံရဲ့ အပူချိန်နဲ့ အခုဘေးပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် ကျွန်မတို့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ် အပူချိန်က မတွေးရဲ့စရာပါ… အာရှမှာ အပူဆုံးဆိုတာအပြင် သမိုးတစ်လျှောက်လုံးမှာ အပူဆုံးဆိုတာကို ပြထားတာပါ …။
ဒီနှစ် အပူဆုံးဆိုတာနဲ့ နောင်နှစ် ဒီလောက်မူ့ဘူးလို့ ထင်နေတွေးနေကြမယ့် သူတွေကို သတင်းဆိုး တစ်ခု ပေးပါရစေ နောင်နှစ်ကျရင် ဒီထက် ပိုပြီး ပူဖို့ပဲ ရှိပါတယ်ရှင်… သစ်ပင်တွေ မစိုက်သရွေ့ သစ်ပင်တွေ ထပ်ပြီး ခုတ်နေသရွေ့…… ဒီနှစ်အပူဆုံးဆိုတာ နောင်နှစ်ကို မှီမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့…ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်နေသောသူများကို ဒီpost လေး ရှယ်ပေးကြပါနော်… ဘယ်နေရာမှာလဲ ကြည့်ကြည့်လို့ ရပါတယ်… သစ်ပင်တွေ ပြန်စပြီး စိုက်ကြပါတော့ …။
စိုးရိမျစရာ ကောငျးတဲ့ အခွအေနေ ရောကျနလေို့ မွနျမာနိုငျငံက လူတှအေတှကျ သန်တာလှိုငျ နှိုးဆျော …
မျောဒယျ သန်တာလှိူငျ ကတော့ မွနျမာနိုငျငံမှာ နတေဲ့ သူတှကေို သူမရဲ့ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာကနေ တဆငျ့ နှိုးဆျောလိုကျပွီနျော..။ ကွောကျစရာ အခွအေနေ ရောကျနလေို့ မွနျမာနိုငျငံက လူတှေ မကျြစိပှငျ့ ကွပါတော့ရှငျ..လို့ နှိုးဆျော လိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ… ။
မွနျမာနိုငျငံ မှာ နတေဲ့သူတှေ မကျြစိပှငျ့ကွ ပါတော့ရှငျ…. ကွကျေစရာကွီးကို ကွောကျရကောငျးမှနျး သိအောငျ ကြှနျမ ဘယျလိုမြား ပွောရ ပါ့မလဲ ? ဟိုးအရငျတုနျးက အုံ့အုံ့ဆိုငျးဆိုငျးနဲ့ စိမျးစိုခဲ့တဲ့ ဒီ နိုငျငံကွီးက နရေငျးထိုငျရငျး ထပွီး ပူလာတာ မဟုတျပါဘူး … ။
နောကျထပျလဲ ဒီထကျ ဆကျပွီး ခုတျနရေငျ ဒီ အပူလောကျနဲ့တငျ ရပျနမှော မဟုတျပါဘူး…ကြှနျမတို့ မွို့ထဲနားက ပနျထရာ လမျးမှာဆိုရငျ အရငျက သကျသကျမဲ့ လှလှနျးလို့ လမျးမကွုံကွုံအောငျ ဖွတျသှားရတဲ့ နရောလေးပါ သဈပငျရိပျတှနေဲ့ လှမှလှ…..လှနျခဲ့တဲ့ ၆ လလောကျကမှ ဟိုတယျကွီးဆောကျဖို့ ဆိုပွီး လှပ အုံ့ဆိုငျးနတေဲ့ အပငျအကွီးကွီး တှကေို ရကျရကျ စကျစကျ ခုတျခလြိုကျတာ မွို့ထဲက ဒဂုံမွို့နယျ ထဲမှာဆိုတော့ တောငျဒဂုံနဲ့ မွောကျဒဂုံကို အားကြ လို့လားမသိပါဘူး …။
ဟိုတယျ ဆိုတဲ့ ပါမဈလေး တငျလိုကျတာနဲ့ ကောငျစီက ခုတျခှငျ့တှေ ပေးလိုကျတာ… လှငျထီးခေါငျပွငျကွီးကို ဖွဈသှားရောပဲ…ဒီထကျ ဆကျပွီး အပူခြိနျ ပိုမွငျ့လာရငျ အပငျအသဈ တှတောငျ ပွနျစိုကျဖို့ မလှယျတော့တဲ့ သဲကန်ဒာရကွီးလို ဖွဈသှားမှာ မကွောကျကွဘူးလားရှငျ့ …။
ဒီပုံလေးကိုပဲ ကွညျ့ကွညျ့ပါ အရငျတုနျးက မွနျာနိငျငံရဲ့ အပူခြိနျနဲ့ အခုဘေးပတျဝနျးကငျြနိုငျငံတှနေဲ့ ယှဉျလိုကျရငျ ကြှနျမတို့ နိုငျငံရဲ့ အနာဂတျ အပူခြိနျက မတှေးရဲ့စရာပါ… အာရှမှာ အပူဆုံးဆိုတာအပွငျ သမိုးတဈလြှောကျလုံးမှာ အပူဆုံးဆိုတာကို ပွထားတာပါ …။
ဒီနှဈ အပူဆုံးဆိုတာနဲ့ နောငျနှဈ ဒီလောကျမူ့ဘူးလို့ ထငျနတှေေးနကွေမယျ့ သူတှကေို သတငျးဆိုး တဈခု ပေးပါရစေ နောငျနှဈကရြငျ ဒီထကျ ပိုပွီး ပူဖို့ပဲ ရှိပါတယျရှငျ… သဈပငျတှေ မစိုကျသရှေ့ သဈပငျတှေ ထပျပွီး ခုတျနသေရှေ့…… ဒီနှဈအပူဆုံးဆိုတာ နောငျနှဈကို မှီမှာ မဟုတျပါဘူးလို့…ငါနဲ့မဆိုငျဘူးလို့ ထငျနသေောသူမြားကို ဒီpost လေး ရှယျပေးကွပါနျော… ဘယျနရောမှာလဲ ကွညျ့ကွညျ့လို့ ရပါတယျ… သဈပငျတှေ ပွနျစပွီး စိုကျကွပါတော့ …။
တန်ဖိုးရှိတဲ့မိန်းမကောင်း ၊ မိန်းမမြတ် ဖြစ်ဖို့ မဖြစ်မနေသိထားသင့်တဲ့ အချက် ( ၁၅ ) ချက်…!
This Month : 38757
This Year : 234155
Total Users : 593179
Total views : 2722566